बाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज बाबु-आमा-छोराको उडान त्यो उडान ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/बाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज बाबु-आमा-छोराको उडान त्यो उडान !
2,2797minutes read
अविवाहित उनी आफ्नी जीवन संगिनी यो पेशाबारे समझदार होलिन् भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छैनन् । ‘जीवनसाथी यही क्षेत्रको रोज्नुहुन्छ कि अरु नै पेशाको रु’ भन्ने प्रश्नमा उनी कुटनीतिक पारामा प्रस्तुत भए । ‘पारिवारिक जमघट, विवाह–भोज आदिमा चाहेर पनि समय निकाल्न सक्दैनौँ, यो समस्या यो पेशा बाहिरका मान्छेले सजिलै बुझ्छन् भन्ने छैन’ उनी मुसुक्क हाँसे । र, थपे, ‘त्यसैले, एभिएसन सेक्टरकै जीवनसाथी रोजौँ कि जस्तो लाग्छ